कस्तो हुनेछ अब केहि वर्षपछिको संसार ? - ज्ञानविज्ञान
कस्तो हुनेछ अब केहि वर्षपछिको संसार ?
सन् २०२० मा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास हुनेछ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नियाल्दा यो वर्षभित्रै प्रविधिले ठूलो फड्को मार्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भैरहेका अनुसन्धान एवं विकासका कारण यो सब सम्भव भएको हो ।
१.सेल्फ ड्राइभिङ भेइकल
२.यातायातका लागि ड्रोन
ड्रोनको प्रयोग अहिले पनि भैरहेको छ, तर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले अलि फरक खालको ड्रोन विकास गरिरहेको बताएको छ । खासगरी अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको उक्त ड्रोन परिवहनका लागि अर्थात् यातायातको क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यद्यपि अन्य विभिन्न कम्पनीका ड्रोनले पनि एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म सामान ओसार्न अर्थात् यातायात प्रयोजनका लागि अहिले पनि ड्रोन प्रयोग गरिरहेका छन् । यो वर्ष यसको प्रयोगले थप व्यवहारिक रूप लिनेछ ।
सन् २०१७ को अक्टोबरमै हङकङको कम्पनी ह्यान्सन रोबोटिक्सले मानवीय स्वरूपको रोबोट निर्माण गरिसकेको छ । उक्त रोबोटको नाम सोफिया राखिएको छ र साउदी अरबमा त उक्त रोबोटलाई नागरिकतासमेत प्रदान गरिएको छ ।
सन् २०१८ मा यो कार्यले अझ गति लिनेछ र आमजनजीवनमा यस्ता रोबोटको भूमिका समेत बढ्नेछ । गुगलले हालै पर्सनालिटी रोबोटको पेटेन्ट पाएको घोषणा पनि गरेको छ, जसले मानिसको व्यक्तित्वअनुसारको रोबोट उपलब्ध गराउनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसको सट्टा रोबोटले काम गर्न थाल्नेछन् ।
४.आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रभाव
यो वर्ष आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईको प्रयोगमा निकै वृद्धि हुनेछ । यसले मानिसको दिमागभन्दा निकै अगाडि बढेर कार्य गर्नेछ । मानिसको जीवनलाई सहज बनाउन यसको निकै उपयोग हुनेछ ।
समय, दिन र कालअनुसार यो प्रविधिले आफैं कार्य गर्नेछ । यसका लागि छुट्टै व्यक्ति वा प्रविधिको सहयोग आवश्यक पर्नेछैन । यद्यपि एआई मानवका लागि खतरनाक पनि साबित हुनसक्छ । त्यसैले सतर्कतापूर्वक यसको अध्ययन एवं प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बताइँदै आएको छ ।
५.सबैका लागि इन्टरनेट
६.तीव्र गतिमा डाटा ट्रान्सफर
७.आँखाबाट नियन्त्रण हुने प्रविधि
८.स्मार्टफोनको प्रविधिमा आउने परिवर्तन
९.४ हजारभन्दा बढी ग्रह
नासाको केप्लर मिसनले हालसम्म हाम्रो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर २ हजार ३ सय ४१ वटा नयाँ ग्रहको खोजी गरेको छ । त्यसैगरी यस्तै खालका ४ हजार ४ सय ९६ वटा ग्रह पनि धेरै दृष्टिकोणले उपयोगी मानिएका छन् । पृथ्वीभन्दा बाहिर पनि जीवनको खोजी गर्ने क्रममा यी ग्रह पत्ता लागेका हुन् ।
यद्यपि तीमध्ये ३० वटा ग्रह हाम्रो पृथ्वीभन्दा दोब्बर ठूला छन् र त्यहाँ जीवनका लागि अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध छ । यो खोजी कार्यले वर्ष २०१८ मा तीव्रता लिनेछ । यसका लागि गुगलको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ ।
१०.क्वालकम फाइभ जी
फाइभ जी प्रविधिको प्रयोग सन् २०१९ देखि मात्र प्रारम्भ हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि सन् २०१८ मै फाइभ जी प्रविधिका केही फोन तथा मोडेम बजारमा आउने अनुमान छ । विश्वको प्रमुख चिप निर्माता कम्पनी क्वालकमले केही महिना पहिले फाइभ जी मोडेम प्रदर्शन गरेको थियो ।
यो वर्ष उक्त मोडेम बजारमा आउनेछ । मोबाइल प्रविधिको मानक निर्धारण गर्ने संस्था थ्रिजीपीपीले फाइभ जी नेटवर्क, स्पेसिफिकेसन तथा फिचरका लागि मानक निर्धारण गरिसकेका कारण पनि यसतर्फ थप कार्य हुने अनुमान छ । यसबाट मोबाइल फोन निर्माता, टावर निर्माता तथा रेडियो इक्विपमेन्ट निर्माताले विभिन्न प्रकारका डिभाइसको निर्माण गर्न थाल्नेछन् ।
सामाजिक सञ्‍जाल नियमन कि नियन्त्रण ?
विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्ने गरी सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । समितिअन्तर्गत ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी गठित उपसमितिले आइतवार गरेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्‍ने सन्देश जनतामा गइरहेको बताए ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सञ्चार ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट वाक्यअंश राख्नुहुँदैन, ऐनबारे जनताले प्रस्ट बुझ्न र अर्थ लगाउन सकुन्’, समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन् । उपसमितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्रविधिको विकासले अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरोकारवाला पक्षको सुझाव र सल्लाहका आधारमा नियमन गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद ईन्द्रकुमारी शर्माले पछिल्लो समयमा प्रविधिको सदूपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सो क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्न व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले प्रभावकारी ढङ्गबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध हुने गरी जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्तिलाई हटाउँदै सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउने तयारी गरेको प्रस्ट पारे । उपसमितिका संयोजक विनाकुमारी श्रेष्ठले सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै छिट्टै समितिले टुङ्गो लगाउने बताइन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको अध्ययनका लागि समितिले गत चैत १८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
फेसबुक इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएममा विश्वभर समस्या आएको छ । फेसबुक र फोटो शेयरिङ सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको न्युज फिडमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै ह्वाट्सएपमा म्यासेस पठाउनमा समस्या भएको छ ।
फेसबुकमा समस्या देखिएपछि विश्वभरबाट युजरहरूले गुनासो गरेका छन् । ट्राफिक मोनिटरिङ वेबसाइट डाउन डिडेक्टरका अनुसार बिहान ६:२८ इडिटीमा फेसबुक डाउन भएको हो । फेसबुकमा यसअघि पनि यस्तै समस्य देखिएको थियो । लगातार आठ घण्टाको प्रयासपछि फेसबुकले उक्त समस्या समाधान गरेको थियो । उक्त घटनाको एक महिना नबित्दै फेरि यस्तै समस्या देखिएको हो ।
Don't Miss it सफल जीवन चाहनुहुन्छ ? सफल जीवनका लागी जान्नै पर्ने कुराहरु (भिडियोसहित)
Up Next भुटेको मकै खानुका यति धेरै फाइदा, क्यान्सरको खतरा समेत कम गर्छ – जानिराखौँ
2 months ago Sandip
नेपालीले आफ्नो फोनमा राख्नै पर्ने १० उपयोगी एपहरु, कुन कुन तपाइको मोबाइलमा छैनन् ?
यो युग प्रविधिको युग हो | सबैको हातमा मोबाइल फोन, ल्यापटप हुन्छ, हामी मोबाइल फोन बिना त एक छिन् पनि…
आलुबखडा खानु भएकाे छ ? यस्ता छन् यसका फाइदा
झट्ट हेर्दा गोलभेंडा जस्तो आकारको देखिने आलुबखडा एक मौसमी फल हो । यो बिशेष गरी बैशाख जेठको समयमा पाक्ने गर्छ…
मानिसहरु बढी अनुहारमा ध्यान दिन्छन् तर गर्दनमा खासै वास्ता गर्दैनन् । फलस्वरुप: गर्दनमा कालो दाग बस्छ । अनुहारका लागि महँगा…
दुधमा धेरै पौष्टिक तत्व पाइन्छ । धेरै मानिसलाई दुध पिएर खान मन नपर्न सक्छ । यस्तोमा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ भोजन…
कस्तो अवस्थामा लिच्ची खानुहुदैन ? जान्नुहोस्
तपाई अधिकांश पाठकलाई थाहा छ भारतको बिहारमा पछिल्लो दुई दशकदेखि अज्ञात रोगका कारण बर्सेनि एक सयभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुँदै…
यस्ता खानेकुरा खानुहेस् जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ
खानामा रिफाइन नुनको बढी प्रयोग गर्दा शरिरमा धेरै हानी हुन्छ । यदि रिफाइन नगरिएको नुन प्रत्येक दिन बिहान तातो पानीमा…
असफल हुने डर छ ? यसरी हटाउनुहाेस् असफल हुने डरलाइ
असफल भइने डरले मानिसले काम नै सुरू गर्दैनन् । त्याे डरले उनीहरू आफ्नाे क्षमतालाइ खेर फाली रहेका हुन्छन्, आफ्नाे समयलाइ…